Jaaliyadda Somalida ee Washington D.C. oo xaflad u samaysay waftiga R/wasaare Farmaajo. – Radio Daljir
Washington, May 13 – Qaar ka mid ah Jaaliyadaha Soomaaleed ee ku dhaqan waddanka Maraykanka ah ayaa xalay casumaad ballaaran u sameeyey waftigii R/wasaaraha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Maxamed ‘Farmaajo’, waftigaasi oo maalmihii ugu danbeeyey ku sugnaa waddanka Maraykanka.
Xafladda casumaadda ah oo ka dhacday magaalada Xarunta ah ee Washingto DC, ayaa waxaa ka soo qayb-galay xubnihii waftiga R/wasaare Farmaayo iyo qurba-joog badan oo Soomaali ah kana kala socotay Jaaliyadaha Soomaalida ee dalka Maraykanka iyadoo kulan-casumaadeedkaasina qurba-joogtu ay ku muujiyeen taageerada ay u hayaan xukuumadda diyaasbarada u badan ee Farmaajo.
Hor-joogayaasha Jaaliyadahaasi iyo xubno badan oo wax ku ool ah, lana hadlay waftiga R/wasaare Farmaajo ayaa soodhaweeyey go’aan xukuumaddu ay qaadatay oo ahaa in aan dibadda lagu qaban wax shir ah oo dib-u-heshiisiin ah, waxayna xukuumadda Farmaajo ay ku amaaneen tallaabooyinkii xagga amniga iyo maamul-wanaagga ay u qaaday.
Qurba-joogta xalay casumadda soodhawaynta ah u sameeyey waftiga Farmaajo, marna ma soo hadal-qaadin dib u dhacyada dawladda iyo waxyaabaha ay ku guul-darraysatay wax-ka-qabashadooda oo ay khilaafyada iyo is-qab-qabsiyadu ka mid yihiin, hase’ahaatee waxay awoodda saareen oo kaliya dhiirro-galinta iyo sheegidda dhaq-dhaqaaqa xagga hormarka ay u qaaday.
R/wasaaraha iyo xubnihii wafigiisa ka mid ahaa oo ka hadlay xafladdana waxay iyana Jaaliyadaha uga mahad-celiyeen soodhaweynta ay u sameeyeen, waxaana ay dhinac kale ballan-qaadeen in ay sii laban-laabi doonaan dadaalladooda wax-qabad ee arrimaha Soomaaliya.
Waftiga R/wasaaraha Soomaaliya Maxmed C/llaahi Farmaayo ayaa dhawrkii maalmood ee ugu danbeeyey ku sugnaa dalka Maraykanka halkaasi oo ay uga qayb-galeen shir ballaaran oo galaha ammaanka ee QM ay lahaayeen, waxaana goluhu uu walaac xooggan ka muujiyey xaaladda Soomaaliya gaar ahaan muranka iyo is-maandhaaf ka dhax-taagan golayaasha dawladda.
R/wasaare Farmaajana waxaa uu golaha ka dhax-sheegay in uu samayn-doono guddi heer wasiirro ah oo uu isagu hoggaaminayo, kuwaasi oo dhax-dhaxaadin ka bilaabi doona khilaafka iyo kala fogaanshaha golayaasha dawladda.